War deg deg ah: R/wasaare Farmaajo oo xil ka qaadis ku sameynaya 4 wasiiro oo xukumadiisa ka tirsan
Posted by admin on April 28 2011 13:09:48
Mogdisho:(hiranstate.com)-R/wasaaraha Somaliya Mohamed A Mohamed oo xil ka qaasi ku sameynaya 4 wasiir oo xukumadiisa ka tirsan.
R/wasaare Mohamed Abdullaahi Mohamed oo isbuucyadii ugu danbeysay la soo baxay dhaqano u muuqaal ek kaligii talisnimo loo aaneynayo iney salka ku heyso 21kii sano ee Kacaankii Cagaarnaa ee mudada ka talin jiray dalka Somaliya ayaa hada wado isku daygiisii ugu danbeyey oo qeyb ka ah talooyin badan oo kaka yimid waxgarad,aqoonyahano, u badan qaraabo hoosaad.
Farmaajo oo ah aqoonyahan Somaliyeed mudana dalka dibadiisa ku maqnaa ayaa wado qorshe uu xilka kaka qaadayo 4 wasiir oo ka tirsan xukumadiisa kuwaasi oo kala ah
1- Wasiirka Arimaha dibada
2- Wasiirka Maaliyada
3- Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo dhulka
4- Wasiirka Beeraha.
Wasiiradan ayuu sheegay Farmaajo ineysan u hogaansamin amarada sida ay ugu hogaansamaan dhawr wasiir oo ay iskala yimaadeen waqooyiga America. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya howsha wasiiradan xilka looga qaadayo ay gabo gabo mareyso iyadoo ay gadaal ka riixayaan wasiiro Farmaajo kala yimid waqooyiga America oo dhawr ah.Dhawaantan ayey aheyd markii lagula taliyey Farmaajo in Ilaaladiisa gaar ah ee isaga ku waardiyeynaya Villa Somaliya ay noqdaan reerka uu ka soo jeedo taasi oo ugu danbeyn dhashay in si cilmiyeysan ciidamdii ka soo jeeday degaanada Puntland iyo Galmudug laga wado agagaarka xarunta Villa Somaliya halka tiro yar oo reer Hiiraan iyo gobolada ku teedsan Mogdisho ciidamda ka soo jeedana lagu wado in gabigood laga fogeeyo halkaasi.
Qorshaha xilka looga qaadayo wasiiradan ayaa la sheegayaa inuu Farmaajo la sugayo inta ay gacantiisa si buuxda uga soo galeyso gobolka Gedo oo uu ka soo jeedo.
Dhacdooyinkii ugu danbeyey ee ay ku dhaqaaqdo xukumada Farmaajo ayaa waxey aheyd kedib markii wasiirka gaashaandhiga uu tagay xadka Somaliya iyo Ethiopia kedibna uu halkaasi ciidamada Gedo ku sugan soo eegay bahidooda halkaasina loogu geeyey waxii ay u baahnaayeen. mudada uu wasiirka gaashaandhiga ku sugnaa halkaasi ayaa waxaa gobolo ay ka mid yahiin Hiiraan abaabul ka waday ciidamo reer Hiiraan ah oo doonayey in iyaguna maadama ay Somali yahiin ay xukumada Farmaajo ka sugayeen iney baahidooda eegaan iyagoo qaarkood Feer Feer tagay kedibna mar danbe ogaadeen in aysan xukumada Farmaajo qorshaha ugu jirin iney si cadaalad ah ula dhaqanto ciidamda Somaliyeed degaankey doonaanba haka soo jeedaane, wasiirkii gaashaandhigana noqday mid soo dhaafi waayey Gedo.
Somaliya waxaa la haray qabiileysi, nin jecleysi, dhagar, cadaalad daro iyo waliba in hogaamiyahii yimaadaba uu ka shaqeeyo oo kaliya danta dadka iyo degaanka uu ka soo jeedo oo kaliya.
Bal si fiican u dhuux qoraal aanu ka soo diyaarinay Farmaajo iyo xukumadiisa iyo qaabka ay u shaqeyso kedibna halka sano ee laga fujin la yahay Farmaajo iyo dhawrkaan wasiir ee kala tagay waqooyiga America iney shacabka Somaliyeed isku soo dumin karaan iyo in kale isweydii ileen dalka adiguba waad u dhalatee cidi kaama xigtee.